A330 Mega Pack 3 afọ 4 ọnwa gara aga #232
Nnọọ! M ebudatara A330-300-200 ngwugwu.
Ma ọ dịghị VC na m Turkish Airlines A330-300:
A330 Mega Pack 3 afọ 4 ọnwa gara aga #233
E nwere ihe abụọ na nsụgharị ke ngwugwu, otu a mere POSKY, na otu onye anaghị nwere a VC. Ọzọ mere Thomas Ruth nwere a VC.
Ọ dịghị ihe na-echegbu, ma ọ bụrụ na ihe niile na-arụnyere n'ụzọ ziri ezi, i nwere ma.
Ka anyị mara ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla ọzọ nsogbu.
A330 Mega Pack 3 afọ 4 ọnwa gara aga #235
Olee nke bụ nke ha bụ POSKY version na nke bụ Thomat Ruth version?
A330 Mega Pack 3 afọ 4 ọnwa gara aga #238
You gaa ịhọrọ ụgbọ elu ahụ, enwere ndepụta aha atọ, ma ọ bụ menus: ndị na-emepụta ụgbọ elu, ndị nkwusa na ụdị ụgbọ elu. Pịa na onye nkwusa, họrọ Thomas Ruth. Echegbula ma ọ bụrụ na ị hụ Thomas Ruth-Luis Quintero, ọ bụ otu ihe ahụ.
A330 Mega Pack 3 afọ 4 ọnwa gara aga #239
Na e nweghị ihe a330-300 ma ọ bụ 200 na njem oche na VC?
A330 Mega Pack 3 afọ 4 ọnwa gara aga #242
good .... dịghị enyere anyị aka ịmata banyere na, n'ezie. Dị ka m kwuru, A330 site tr abịa na VC, kama ka o nwere a njem ụlọ, n'ezie amaghị. M nwere a otu mkpọ arụnyere ma ebe m na-adịghị eche banyere ụlọ, m na-adịghị na-achọ ya.
A330 Mega Pack 3 afọ 4 ọnwa gara aga #243
Ma ọ dịghị A330-300 site Thomas Rut na e nwere na posky version, na ị na-ahụ kwuru na ha na-enweghị VC
A330 Mega Pack 3 afọ 4 ọnwa gara aga #244
... oh nwoke .....
OK, mbụ -give m njikọ na ugbo elu mkpọ gị ebudatara
Nke abụọ, ọ bụ site na ebe a ma ọ bụ ebe ọzọ?
Nke atọ, na-ọ arụnyere n'ụzọ ziri ezi?
Nke a bụ onye m nwere: http: //www.rikoooo.com/downloads/viewdownload/6/799
na ugbu a, na nke m FSX Enwere m TR A330-300 ma na-agba ọsọ. Yabụ, nye anyị ozi ndị ọzọ.
A330 Mega Pack 3 afọ 4 ọnwa gara aga #245
Dariussssss dere: ugbua, na nke m FSX Enwere m TR A330-300 ma na-agba ọsọ. Yabụ, nye anyị ozi ndị ọzọ.
ok ọma, m na na na gị na isii na F-14, sidewinders ekpochi jidesie gị ebe ị na-na na e kwuru a ọjọọ iche ..... m na e nyere aga na-n'ihu ọkụ ma ọ bụrụ na ị na-eme otu ezighị ezi aga .....
A330 Mega Pack 3 afọ 4 ọnwa gara aga #246
Kedu ihe m mere? Emere m ike m niile iji nyere aka ebe a. Ọ bụrụ na m kwuru ma ọ bụ mee ihe na-adịghị mma, m na-arịọ mgbaghara maka ya, mana echeghị m na m mere ya.
Oge ike page: 0.368 sekọnd